9 Apr 2018 . 10:56 AM
“ကူးပြောင်းခြင်း၊ပြောင်းရွှေ့ခြင်း” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ ပါဠိဘာသာစကား “သင်္ကန္တ” ကို မြန်မာမှုပြုပြီးတော့ “သင်္ကြန်” လို့ခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဟောင်းကနေ နှစ်သစ်ကို ကူးပြောင်းတဲ့ကာလကို “သင်္ကြန်ကာလ”လို့ ခေါ်ဆိုပါတယ်။ ပါဠိစကားလုံး”အန္တ” မှ ဆင်းသက်လာတဲ့ “နောက်ဆုံး” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ အတာနှင့်တွဲဖက်ပြီးတော့လည်း “အတာသင်္ကြန်” လို့ ဆိုကြပါသေးတယ်။
သင်္ကြန်ပွဲတော် ကျင်းပပုံနဲ့ဆက်စပ်ပြီး “အတာအိုး” အကြောင်းကိုလည်း ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် ဖော်ပြပါဦးမယ်။ အတာအိုးကို သင်္ကြန်စောင့်ကြိုတဲ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ သင်္ကြန်မကျခင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရပါတယ်။ ပန်း ၇မျိုး ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း အညွန့် ၇ မျိုးနဲ့ ရေပြည့်အိုးမှာ ထည့်ကြရပါတယ်။
နံပတ် ၇ ဆိုတာက ၇ ရက်သားသမီးကို ကိုယ်စားပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ကြန်ကျပြီဆိုတာနဲ့ အတာအိုးကရေကို သွန်ပြီး သင်္ကြန်ပန်း၊ သင်္ကြန်အညွန့်တွေကို အိမ်ဦးဝင်းထရံတွေမှာ ထိုးစိုက်ကာ ဆုတောင်းကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆုတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် မကောင်းတဲ့ ကံဆိုး၊ ကံညံ့တွေ ပျောက်ကာ ကံဇာတာတက်လာပြီး လူမှုနယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်မယ်လို့ ရိုးရာဓလေ့အရ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ၂၁ရာစုခေတ်မှာတော့ အတာအိုးထားခြင်းဓလေ့ကလည်း မြန်မာလူမှုနယ်ပယ်မှာ ကွယ်ပျောက်စပြုလာပါပြီဖြစ်ပါတယ်။
အကိုးအကား ။ အရှင်နန္ဒဝံသ (ဇေယျသုခ ဓမ္မရိပ်သာ)
by yoelu .7hours ago